बर्बाद भयो : नविना लामा - Himali Patrika
बर्बाद भयो : नविना लामा
हिमाली पत्रिका ४ साउन २०७८, 3:08 pm
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद नविना लामाले एउटा पार्टीमा पार्टीभित्रको गुटबन्दी कोभिड जस्तै नयाँ प्रकृतिको भएको बताउनुभएको छ । सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जनताको बहुदलीय जनवाद खोइ भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभएको छ ।
‘नेकपा एमाले भित्रको पनि गुटबन्दी बडो खतरनाक र कोभिड जस्तै नयाँ प्रकृतिको छ । किनभने आफ्नो पार्टीको सरकार ढलाएर अर्को पार्टीलाई सरकार बनायो । यो भन्दा दुख़त घटना के हुन सक्छ ?’ उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘बर्बाद भयो । जबज खोही ? हाम्रो यस्तो राजनीति ? हाम्रो पार्टीको राजनीति पनि पार्टी एमाले भोट अर्को अर्को पार्टी हो ?’
उनले नेकपालाई विचार, व्यवस्था भन्दा बढी आफू केन्द्रित पदको लडाइँमा गुटबन्दीले पार्टीलाई सत्यानाश गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको, ‘नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास केलाएर हेर्दा फुट विभाजन विचार, व्यवस्था भन्दा बढी आफू केन्द्रित पदको लडाइँमा गुटबन्दीले पार्टीलाई सत्यानाश गरेको देखिन्छ । महान् नेताहरूको र कार्यकर्ताहरूको उज्ज्वल भविष्य समाप्त भएको देखिन्छ । अहिले नेकपा विभाजन पनि त्यस्तै देखिएको छ ।’